ဒါကြောင့်အင်္ဂါရပ်အားလုံးထောင်ဝင်းထဲမှာမြက်ပင်ပစ္စုပ္ပန်ကိုချုံ့နှင့်ပုံဖော်ဖို့ရှိပါတယ်အဖြစ်က Black & နှစ်ထပ်တစ်အတော်လေးအသုံးဝင်ထုတ်ကုန်များမှာ. ဘက်ထရီ operated ယူနစ်အဖြစ်ကောင်းစွာအများကြီးဆူညံသံပါစေမည်မဟုတ်. ထိုသို့ယူနစ်လုပ်ကိုင်ရန်မလွယ်ကူဖြစ်သကဲ့သို့, အလုပ်သမားတက်လေ့ကျင့်ရန်လွယ်ကူသည်. အဆိုပါညှပ်အနုစိတ်အပိုင်းများကိုဖြတ်ပုံဖော်ဖို့အလွန်အဆင်ပြေသည်. သငျသညျဆက်ဆက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနေအများဆုံးစေမည်. သင်ရရှိနိုင် features တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးလက်ျာရှေးခယျြမှုဖြစ်စေတော်မူမည်ဒါကြောင့်သင်ကတူညီတဲ့အမျိုးအစားအတွက်အခြားကုန်ပစ္စည်းများအားဖြင့်သွားသင့်တယ်.
ဒါဟာသိပ်ပုံမှန်ထိုဥယျာဉ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါသည်. ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးမျိုးအသုံးပြုကြသည်. ထိုကဲ့သို့သောရိုးကိုအဖြစ်အနုစိတ်နေရာများမှာမြက်ပင်ဖြတ်ဖို့အမိန့်နှင့် စမ်းရေ, ထိုတူရိယာရဲ့ဒီဇိုင်းကိုသင်အစွမ်းကုန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသင့်. သငျသညျအမြိုးမြိုးကိုအမြန်နှုန်းမှာကိရိယာကိုသုံးနိုင်မည်ဖြစ်သင့်. သငျသညျအမြင့်ဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိလိမ့်မည်သည့်အခါ, သင်သာယာလှပလှပမှုပျော်မွေ့လိမ့်မည်ဟုထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ထိုဥယျာဉ်ကိုပုံဖော်ဖို့ဖြစ်နိုင်သည်. လူအပေါင်းတို့သည်ပေါင်းပင်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လက်ျာအထွဋ်မှာစုစုပေါင်းပုံဖော်အားဖြင့်, သငျသညျပြင်နေရာအများဆုံးစေမည်. Black က & နှစ်ထပ်စာရင်း 136 ကချုံ့ခြင်း၏ညာဘက်ကြင်နာရှိပါတယ်အဖြစ်ဤအမှု၌သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ, parameters တွေကို edging နှင့်ကိုင်တွယ်.
Black ကနှစ်ထပ်စာရင်း 136 ဖြောင့်ရိုးတံရှိတယ်. ဒါဟာအလိုအလျောက်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နှင့်တုန့်ပြန်အလွန်မြင့်မားသည်. သင်ပင်ထိုကဲ့သို့သောရိုးကိုအဖြစ်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့နေရာများမှာအလွယ်တကူမြက်ပင်ကိုချုံ့နိုင်, စမ်းရေနှင့်သစ်ပင်များ. သငျသညျအကြီးအမြန်နှုန်းမှာအလုပ် execute နိုင်ပြီးကြောင့်ဒေါင်လိုက်လိုင်းအတွက်ကိုချုံ့ဖို့ဖြစ်နိုင်. အဆိုပါ 36 Volts rated ညှပ်တစ်ဖြောင့်ရိုးတံနှင့်တကွကြွလာ. ကုန်ပစ္စည်းများ၏အလေးချိန်သည်7အလေးချိန်ပေါင်. ဒါဟာ 0,065 "ဖြတ်တောက်ခြင်းလိုင်းရှိပါတယ်.
အဆိုပါ ညှပ် ပုံမှန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အတော်လေးစိတ်ချလက်ချသုံးနိုင်တယ်. ဒါဟာပုံမှန် mowing လှုပ်ရှားမှုများပြီးနောက်မြက်ပင်ကိုချုံ့ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. သငျသညျအပွင့်ကုတင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင်မည်, ထိုယူနစ်အပေါ်အမျိုးမျိုးသောထိန်းချုပ်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အလွယ်တကူလမ်းဘေးစင်္ကြံနှင့်နယ်နိမိတ်.
ထိုတူရိယာကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအတော်လေးအငြိမ့်သစ်တစ်ခုလိုင်းစတင်နိုင်ပါသည်. အဆိုပါထိန်းချုပ်မှုကိုအလွယ်တကူသုံးနိုင်တယ်. စက်ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. လိုင်းတိုးတက်မှုတွေထဲကအလိုအလျှောက်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်. သင်တစ်ဦးအကျိုးရှိစွာထုံးစံ၌အလုပ်မကယ်မလွှတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်အဆိုပါယူနစ်ထက်ပိုဖြတ်တောက်ခြင်းအာဏာကိုကယ်တင်တတ်၏. သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်အာဏာကိုသို့မဟုတ် Run Time ကို customize နိုင်. အသုံးပြုသူများထံမှရောထွေးတုံ့ပြန်မှုရှိပါတယ်. အဆိုပါ ဘက်ထရီပါဝါ အသုံးပြုသူရှည်လျားနာရီများအတွက်ညှပ်လည်ပတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်တိုးမြှင့်ထားရမည်. ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဓာတ်ငွေ့ရှုးနှင့်အတူအလွန်မြင့်မားဖွစျလိမျ့မညျကြောင့်ဓာတ်ငွေ့ရှုးထက်ဝေး သာ. ကောင်း၏.
အဘယ်သူမျှမ dual-line က
အဆိုပါလိုင်းလာသောအခါ string ကိုတိုးတက်လာဖမ်းယူစေခြင်းငှါ,
CHECKOUT က Black ဒီမှာနှိပ်ပါ & နှစ်ထပ် LST136
ဘက်ထရီ (လျှပ်စစ်မီး), Black ကနှစ်ထပ်, နှစ်ထပ်, မြက်, နီကယ်-သယံဇာတဘက်ထရီ, string ညှပ်, Tools များ
← ကြက်တူရွေးဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားစမတ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: သင့်ရဲ့ကားရဲ့ Dash ခုနှစ်တွင်အန်းဒရွိုက်? အသက်ခြောက်ဆယ်ကနေဒါရထားဘေးအန္တရာယ်အတွက်သေဆုံးသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံး. →